Wasiirka arrimaha gudaha oo ku amaanay ciidamada dowlada iyo kuwa Jabuuti sida wanaagsan oo ay wax uga qabteen nabadgelyada Beledweyn – idalenews.com
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku ammaanay maamulka gobolka Hiiraan,shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyn iyo Ciidammada Hiil Walaal ee ka socda Jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti sida wadajirka ah ee ay uga wada shaqeeyeen Ammaanka iyo hormarka gobolka.
Mudane C/kariin Xuseen Guuleed wasiirka wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka oo shalay kusoo laabtay Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkii uu ku tegay Beledweyne isagoo ku tilmaamay in uu ahaa mid ay ugu kuurgalayeen xaalada amaanka, Siyaasada iyo arrimaha bulshada.
Wasiirka ayaa xusay in ay mudadii Sadexda maalmood ahaa oo ay joogeen Beledweyn ay la kulmeen dhamaan qeybaha bulshada gobolkaasi, oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameedyada, Bulshada rayidka ah, haweenka iyo dhalinyaro, isagoo qiray in nabadgelyo buuxda ay ka jirto magaalada Beledweyn, taas oo ay ka shaqeeyeen ciidamada nabadgelyada iyo kuwa Jabuuti ee ka howlgala gobolkaasi.
‘’Wadatashiga an la yeelaneynay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dambeysay kadib markii dowladu go’aan ku gaartay in gobolada iyo degmooyinka dalka laga dhiso maamulo KMG ah, waxaana dadka wareeysanaynay sida ay u arkaan maamuladaasi KMG ah, wadatashigaasina wuxuu noogu soo gebageboobay jawi aad u wanaagsan’’ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka.
Wafdigan ka socday dowalada ee booqday Beledweyn ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, waxaana safarka ku wehliyay wasiirka Kheyraadka iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya.
Ra’isulwasaarihii Hore Dr Cabdiweli Gaas Oo SI Weyn Mareykanka Loogu Soo Dhaweeyey “DAAWO SAWIRRADA”